ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: စိတ်ဖြေဆေး
လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ရှုပ်လာရင်၊ စိတ်ညစ်လာရင် ဘာတွေလုပ်ကြလဲ။ တချို့တချို့က သီချင်းတွေ အော်ဆိုပစ်တယ်။တချို့ကျ အိပ်ဆေးသောက်အိပ်ပစ်တယ်။ တချို.ကအရက်သောက်တယ်။တချို့က အပင်စိုက်တယ်။တချို့ကအော်ငိုတယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ စိတ်ပြေစေဖို့တခုအတွက်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထင်ရာ၊ ကိုယ်စိတ်ပြေရာလုပ်တတ်ကြတယ်။
ခင်ဗျားရော စိတ်ညစ်ရင်ဘာတွေလုပ်လဲ။ကျွန်တော်လား။အင်းငယ်ငယ်ကတော့ အိမ်မှာရေထဲတဲ့ ရာဝင်အိုးထဲခေါင်းစိုက်ပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိ အော်ပြစ်တယ်။အခုတော့ အဲဒီအိုးတွေလဲ ကွဲသွားပါပြီ။အသံပြာကြီးရဲ့အော်သံတွေ မခံနိုင်လို့။ အတော်ကြီးတော့ အရက်သောက်ကြည့်တယ်။အတော်အတန်လဲ သောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်စိတ်ကြောင့် လဲပါတယ်။ ကောင်းတယ်လို့ စိတ်မှာထင်မိလို့ပါ။စိတ်ပြေမယ်ထင်တဲ့ အယူကြောင့်လဲပါပါတယ်။အခုတော့ အလိုနေရင်းပြတ်သွားတယ်။ သောက်ချင်စိတ်သိပ်လဲ မရှိတော့လို့ပါ။မယုံဘူးဆိုလဲ စာဆက်ဖတ်ရအောင် လောလောဆယ် ယုံပေးထားပါ။
ဘယ်လိုပင် အဆင်မပြေမှုတွေရှိပါစေလေ ကိုယ်ရဲ့စိတ်က ဘာသာရေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ရည်သန်ထားရင် ဘယ်အခြေအနေမျိုးမဆိုဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားတောင် အနောင့်အယှက်တွေကြားက ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်သန်လို့ ဘုရားပွင့်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။ကျွန်တော်တို့လဲ ဘာသာရေးလုပ်မယ်၊ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒက တကယ်လုပ်ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ တရားစခန်းရိပ်သာတွေ အတော်များများဖွင့်လှစ်နေပြီဆိုတာ လူအတော်များများသိနေကြပါပြီ။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တရားထိုင်တာကို သိပြီး တရားထိုင်ဖို့မေ့နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရော၊ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရော “အသိ၊ သတိ” ရစေချင်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်ရုံနဲ့ တရားထိုင်ဖို့သာမက ရတဲ့အချိန်တိုင်း၊ ရသမျှအခွင့်အရေးတိုင်း တရားထိုင်ပေးကြပါ။အခုဆို ဆရာတော်အတော်များများကလည်း တရားထိုင်ဖို့ စာတွေရေး၊ တရားတွေဟောပြီး လှုံဆော်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်း ကုသိုလ်တရပ်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးတာပါ။မိတ်ဆွေအပေါင်း တရားထိုင်ဖို့ သတိရသွားသူတွေရော၊ အသိရသွားသူတွေ ဖြစ်လာအောင် ကုသိုလ်ပြု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 12:00 PM
တံဆိပ်များ ဘာသာရေး , ဆောင်းပါး
စိတ်၏ဖြေရာ November 13, 2009 at 1:25 PM
mysterysnow November 13, 2009 at 4:37 PM
Waing November 13, 2009 at 10:41 PM
တရားမှတ်နည်းကတော့ အကောင်းဆုံး စိတ်ဖြေဆေးပေါ့
ညလင်းအိမ် November 14, 2009 at 2:45 AM
linn November 14, 2009 at 4:06 AM
ပြန်ရောက်နေပြီလား.. ပြန်သွားကတည်းက မပေါ်လာလို့လေ .. စိတ်ဖြေဆေးလာဖတ်တာ .. ကျေးဇူး .. ခုတလော .. စိတ်ဖြေဖို့ လိုအပ်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ ... ခက်တာက တစ်ခါတစ်လေ သိသိနဲ့ ပေနေတဲ့ စိတ်ကလေးပဲ ...
အနော် November 14, 2009 at 10:43 AM
အကိုချမ်းလင်းနေရေ တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ သိပ်စိတ်အေးချမ်းပါတယ် ရန်ကုန်မှာတုန်းက နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် လယ်တီ သန်လျင်မှာ သင်္ကြန်တွင်း တရားထိုင်ဖူးပါရဲ့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ လက်တွေ့မရှိတော့ပဲ အခုတော့ ဘုရားတောင် ဦးသုံးကြိမ် မနည်းချပီး အပူတောထဲ အရှုပ်တွေချည်း လုပ်နေမိတော့တယ် :(
သိင်္ဂါကျော် November 15, 2009 at 3:34 AM
စိတ်ညစ်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ချို့ တစ်ချို့ အပျော်အပါး အသောက်အစား ဘက် ရောက်မသွားပဲ ဘုရား တရားနဲ့ နေတာ အကောင်းဆုံးသော စိတ်ဖြေဆေးပါ...
khun November 15, 2009 at 9:44 PM
ဒီမှာတော့ ဘုရားဝေး တရားဝေးဖြစ်နေတယ်။
မိုးစက်အိမ် November 16, 2009 at 4:14 PM
ဟုတ်တယ် အစ်ကို တရားနာခြင်း အကျိုးကျေးဇူးက
တော်တော်လေးထိရောက်တယ် ဗျ . . . စိတ်ကိုတည်
ငြိမ်စေတယ် . . . ထူးထူးခြားခြား အကျိုးကျေးဇူးရှိတာ
တော့အမှန်ပါဘဲ ဗျာ . . .
လင်းကြယ်ဖြူ November 16, 2009 at 6:16 PM
ပြီးတော့ သတိ အမြဲ ကပ်နေမှာပဲ..
desertraindrops November 17, 2009 at 6:27 AM
တရားထိုင်တာက အကောင်းဆုံးပါ့ပဲ။ ဒီရောက်ပြီးကတည်းက တရားထိုင် မထိုင်ဖြစ်တော့ဘူး ကိုချမ်းရေ။။ စိတ်ဆိုးလာရင်တော့ စာရွက်တွေ ထိုင်ဇြဲနေလိုက်တယ်။ :)
ကိုလူထွေး November 18, 2009 at 4:31 PM
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်မြဲဖို့ စိတ်က အဓိကဆိုတာကို တနေ့က ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ဂိုးသမားအကြောင်း ကြားပြီးမှ ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲ ခံစားတတ်လာတယ် ကိုချမ်းရေ...
တရားထိုင်တာ ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင်ထိန်းတဲ့ နည်းတခုမို့ ကျင့်ကြံနိုင်ရင် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး...
အခုလိုမျှဝေတာ တကယ်မွန်မြတ်တာမို့ ချီးကျူးပါရဲ့ဗျာ...
ဒဏ္ဍာရီ November 20, 2009 at 8:42 PM
တခါတလေမှ စိတ်ညစ်နေရင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ ဒေါသစိတ်ကို ပြေအောင် ဖြေဖျောက်ရတာ ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာ တခုပါပဲ။ အကိုပြောသလို တရားလေးမှတ်ရင် စိတ်ကိုအာရုံပြောင်း နိုင်အောင် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါ့မယ်။
တချို့သောသူတွေဟာ စိတ်ညစ်ရင် လမ်းမှားကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ အခုလို စိတ်ကိုဖြေသိမ့်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကို ညွှန်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို။